Chikwereti chakachengetedzwa nezvivakwa: chii icho | TeraNews.net
Chikwereti chakachengetedzwa nezvivakwa: chii icho
Munyori Tera nhau Yakabudiswa pa 03.09.2019
Chikwereti chakachengetedzwa neye real estate ndiko kugamuchira chikwereti chemari kubva kune wega kana zviri pamutemo sangano. Chinhu chakatsidzirwa chinhu chero chipi zvacho chaicho chivakwa chine hukoshi mumusika. Icho chikwereti chakadai chinowanzovhiringidzwa nechikwereti, izvo zvisizvo zvisizvo. Mushure mezvose, chinyorwa chechipo haisi nyaya yekutenga.
Imwe neimwe kambani inopa chikwereti chakachengetedzwa neyekutengesa zvivakwa zvine mitemo yayo. Semuenzaniso, mabhangi mazhinji anoda chitupa chemari. MFI MiG Chikwereti Astana inopa mari kune chero chinangwa maringe nechirongwa chakareruka, pasina mapepa. Chikwereti pane chengetedzo yezvivakwa muAlmaty -Mhinduro yakakura yekukudziridza rako bhizinesi.
Chikwereti chakachengetedzwa nezvivakwa: zvakanakira
Kutsigira. Dambudziko nemabhangi ese, pasina kusarudzika, ndeyakareba kubvumirwa kwechikwereti chakachengetedzwa nezvivakwa. Kukosha kwezvivakwa, kutsvaga kwevatengi mune dhatabheki dzemamwe masangano, kubvumidzwa kweiyo mari nehofisi yemusoro, masaini akawanda kusaina zvibvumirano, inishuwarenzi. Iyo MiG Chikwereti Astana kambani inoziva mutengo wenguva.
Kuti uwane chikwereti iwe unofanirwa kuwana mapepa madiki ezvinyorwa:
Vanhu pachavo - aya magwaro ekuzivisa uye kusimbisa kodzero yekororo, pamwe nechitupa kero uye gwaro rekunyoresa kune zvivakwa ..
Masangano epamutemo - iyi ikopi yezvinyorwa zvekanzuru uye kodzero dzezvivakwa, pamwe nemvumo yedare rinodzora yemukweretesi uye gwaro rekunyoresa kune zvivakwa.
Kukodzera kwakanaka. Mabhangi anofarira kurerutsa kukosha kweimba yezvivakwa inotamiswa seyakanyorwa. Chokwadi, mune chero matambudziko, bhangi richaramba richine pundutso. MiG Chikwereti Astana hachiite zvekubiridzira - mutengo unofungidzirwa pamitengo yemusika. Mukuwedzera, iyo kambani ine basa - yakasununguka nyanzvi yekushanya yeongororo yekutanga yekubvumirana dzimba dzekugara.
Munhu oga anotaurirana. Pamusoro pekudzikisira kukosha kwehukama hwekudyidzana, mabhangi anosarudzika akananga kurudzi rwezvinhu pachavo. Mari inopihwa nechido kunze kwekuchengetedzeka kwedzimba dzinowanikwa muzvivakwa zvakakwira. Mabhangi anoedza kupa hushoma huwandu kune zvimwe zvivakwa. MiG Chikwereti Astana haina kugadzirisa real estate. Dzimba dzakavanzika, zvivakwa zvevhu, zvisiri zvekugara zvinhu - hapana zvinotadzisa anenge akwereta. Kana achidikanwa, mutengi anogamuchira chikwereti chakapfuura 50-60% yekukosha kwemubatanidzwa.
Chikwereti chakachengetedzwa nezvivakwa: zvakashata
Kune nguva dzose njodzi, kunyanya mune izvo zviitiko kana mari inotorwa kuvandudzwa kwebhizinesi kubva kutanga. Asi kunyangwe mune idzi zviitiko, sangano reMiG Credit Astana rakagadzirira kukanganisa. Pane zvishandiso zvakati wandei izvo zvinobatsira iye anokweretesa kudzorera chikwereti chakachengetedzwa neyezvivakwa nemisika pazita rakanaka.
Aya ndiwo mabhangi anofarira iyo insolvency yeanokwereta. MCO MiG Chikwereti Astana chiri kushandira ramangwana. Kana uchinge watora chikwereti pane zvakanaka, mutengi achanyorera zvakare kana kurudzira kambani kushamwari uye vavanozivana. Aya ndiwo maitiro akavakwa nebhizinesi kutenderera pasirese.
Hondo yekutengeserana yeUS ne China inosvika pakusadzoka
Dhijitari mutero mukufarira Apple neGoogle - maonero
Olympus - mugumo wenguva yedhijitari kamera
ZIDOO Z10 TV bhokisi: imba multimedia Center
2020 sneakers fashoni: Adidas Samba adzoka
Nimses, Bitcoin, Tesla: mapiramidhi emari
Maitiro ekudzima YouTube ads paTV
TV BOX VONTAR X3: yakanakisa bhajeti mushandi muna 2020
MUAMA Enence: mushanduri wemitauro yakawanda
Nyowani Beelink GT-King flagship (Amlogic S922X) Wongororo yakazara
Asus TUF Gaming VG27AQ Monitor - Yechokwadi Yekuongorora
Kuti ushande pamwe chete, ndapota taura: teranews.net@gmail.com
© 2020 - Teranews. All rights rights rights rights rights rights rights